तिथि मेरो पत्रु » कुकुर मा Katz : कुकुर संग प्रशिक्षण र रहन गर्न एक: सामान्य गाइड
द्वारा जन Katz
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 31 2020 |9मिनेट पढ्न
यो प्रश्न सम्भावित कुकुर मालिक पहिलो सोध्नुपर्छ छ, एक कुकुर संग कुनै जीवनमा सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण:
हामी एक घर ल्याउन अघि कुकुर संग हाम्रो जीवन बारे मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर बनेका छन्. अमेरिका मा एक कुकुर हासिल disturbingly छ
सरल. तपाईं अनलाइन trawl सक्छ, एक प्रजनन पाउन, वा केही बच्चा सुपरमार्केट बाहिर दिइ रहेको छ puppies को एक ले (म यो सल्लाह थिएन). तपाईं
बाहिर पैदल वा ड्राइभिङ्ग गर्दा बरालिएको भर आउन सक्छ. केही मानिसहरू चट्टान कडा व्यावहारिक कारण कुकुर खोजी: सुरक्षा, शिकार, चिकित्सा, खोज-र-उद्धार. तर हामी भन्दा, मनोवैज्ञानिक र behaviorists भन्न, बढी जटिल भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक मनसाय.
किन म एक कुकुर चाहनुहुन्छ?
अधिक चिन्ता मानिसहरूले आपसमा जोड्ने गरेका छन्, अधिक उनि कुकुर बारी (र अन्य जान्छन्) अंतराल केही भर्ने. हामी प्रेम गर्न र बनाइराख्नु हो कि तरिकामा प्रेम गर्न आवश्यक जस्तो देखिन्छ, शुद्ध, र भरपर्दा.
समकालीन अमेरिका छ, थुप्रै तरिकामा, एक खंडित, Detached समाज. हाम्रो विस्तार परिवार दूर सरेका छन्; हामी हाम्रा छिमेकीहरूले अक्सर थाहा छैन; हामी धेरै रात मा माथि होल, एक स्क्रीन को प्रकार वा अर्को घूर. छोडपत्र सामान्य छ. कार्य अस्थिर भएको छ, धेरै लागि अनिश्चित, अक्सर अप्रिय. धेरै मानिसहरू बाँच्न र एक अर्को भन्दा कुकुर अन्तरक्रिया गर्न सजिलो पा रहे, र मानिस र कुकुर बीच यति बन्धन निरन्तर बलियो बढ्न.
यद्यपि यी दुई प्रजातिका सम्बन्ध मा यस विकास पक्षीय एक छ. धेरै कुकुर राम्रो मानिसहरूले सेवा गर्दै’ प्रगाढ लगाव, तर कुकुर यस्तै छनौट गर्न सक्दैन. यो ठूलो कुकुर प्रेम प्रसंग उत्पन्न भएको छ कि मानव आवश्यकता हो.
मानिसहरूले आफ्नो जीवन को केन्द्र मा कुकुर ल्याउन फैसला गरेको छ. पशु अधिकारको बारेमा सबै fussing लागि, कुकुर कुनै छ. तिनीहरूले उपभोक्ता निर्णय गर्न प्राप्त छैन. तिनीहरूले बाँच्नको लागि आवश्यक सबै कुराको लागि हामीलाई निर्भर छौं. तिनीहरू फेरि कुरा गर्न सक्दैन; तिनीहरूले आफ्नो वातावरण वा भावी बारेमा कुनै गुन छ.
कुकुर मदत र हजारौं वर्षदेखि मानिसहरूले संग काम गरेको छ तापनि, तिनीहरूले भन्दा अन्य केहि देख्न पुगेँ भनेर हालैका दशकहरूमा मात्र हो (भन्दा अझ) जनावर. पत्रु पालन धनी बीच लोकप्रिय र मध्ययुगीन समय मा शक्तिशाली थियो, पशु ethicist याकूब Serpell पुस्तक पशु र मानव समाज मा नोट: परिप्रेक्ष्य परिवर्तन, तर यो ढिलो सत्रौँ शताब्दीमा सम्म व्यापक respectability प्राप्त भएन, एक विज्ञान र प्राकृतिक इतिहास लागि बढ्दै उत्साह समय र पशुहरूको वृद्धि चासो’ हितमा. त्यसबेलादेखि, कुकुर हाम्रो सम्बन्ध एकदम तीव्र छ. हामी मानिसहरूलाई अर्को प्रजाति नजिक कहिल्यै छन्. हामी आफ्नो जिम्मामा मा अरबौं डलर को दसौं खर्च, भोजन, र मनोरञ्जन; तिनीहरूलाई मानव नाम दिन; तिनीहरूले हामीलाई बुझ्न सक्छौं भने तिनीहरूलाई कुरा; हामी तिनीहरू फर्केर हामीलाई भनिरहेका छन् के थाहा विश्वास.
यो emotionalism अक्सर हाम्रो आवश्यकता मा कुकुर अल्झाउने र चाहन्छ. यो अब सामान्य छ, यो पनि एक पुस्ता पहिले स्तरका हुने थियो यद्यपि, मानिसहरू अधिकांश मानिसहरू प्रेम भन्दा माफी वा तिनीहरूले आफ्नो कुकुर धेरै प्रेम भन्ने अप्ठ्यारोमा बिना भन्न सुन्न, तिनीहरूले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई रूपमा आफ्नो कुकुर देख्न कि, तिनीहरूले आफ्नो सबै भन्दा घनिष्ठ समस्या र रहस्य आफ्नो कुकुर गर्न पोख्न कि, को हुन् अधिक वफादार र आमाबाबुले भन्दा समझ, साथी, प्रेम गर्ने, वा साथीहरू. एक पुस्तक लागि मेरो अनुसन्धान को भाग रूपमा एक पशु चिकित्सक कार्यालय मा केही दिन व्यतीत गर्छु, म अर्को चाहनाको पछि एक महिला सुन्न आश्चर्यचकित भएको थियो, “हेर, डाक्टर, म मेरो पति बाँच्न सक्छ, तर तपाईं यो कुकुर बचाउन भयो!” यद्यपि vets तिनीहरूले यो सबै समय सुन्न भन्नुहोस्.
अनि मात्र होइन महिलाहरु. व्यवहार अनुसन्धान भावनात्मक तवरमा सहयोग अझै जटिल लाग्न किनभने महिला भाग मा कुकुर प्रेम भन्ने देखाउँछ, गहिरो यद्यपि wordless तरिकामा आफ्नो मालिक बुझ्न सक्ने. यसैबीच, तिनीहरू सिद्ध मित्र हो किनभने मानिसहरू कुकुर प्रेम, ठाउँमा जान र काम गर्न खुसी, तर पकड वा माग कुराकानी गर्न असमर्थ. यो जस्तै वा छैन, हाम्रो कुकुर’ upbringings हाम्रो आफ्नै प्रतिबिम्बित. हामी हाम्रो कुकुर हामी उपचार गरियो बाटो व्यवहार गर्छन, वा हामी 'इच्छा बाटो भएको हुनेछ. कुनै पनि तरिका, हाम्रो आफ्नै मेल गहिरो कुकुर र मार्गहरू हाम्रो मनोवृत्ति हामी रेल र तिनीहरूलाई कुराकानी आकार.
यो सामान्यतया एक बेहोस प्रक्रिया हो. केही मालिक आफ्नो कुकुर सम्बन्धमा धेरै आत्म-जागरूकता ल्याउन वा उनीहरू आए आफ्नो कुकुर मा चिच्याएर जब आफ्नो परिवारको विचार, वा ती coo तिनीहरूले बुझे भने. त्यो घर आउँदा मलाई थाहा एक स्कूल नर्स कान हरेक रात उनको कुकुर समाते, चिल्ला, “के तिमी मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? म आफ्नो प्यारी ममी छु?” कुकुर पृष्ठभूमिका समयमा बन्द चलान गर्ने प्रयास किन त्यो सोच्नुभएको.
त्यसैले एक कुकुर रही लागि मनसाय महत्त्वपूर्ण बन्न, तपाईं आफ्नो हितबारे चिन्तित छन् र राम्रो सम्बन्ध चाहनुहुन्छ भने. यो एक निर्भर पशु देखि संगति खोज्न सजिलो कि किन-एक-कुकुर प्रश्न गर्न आफ्नो जवाफ भन्दा एक व्यक्ति देखि छ? तपाईं किनभने टिभी र चलचित्र देखि अचेतन संदेश को एक कुकुर चाहनुहुन्छ? तपाईं अधिक प्रशिक्षण भन्दा प्राणीहरू बचाव र तिनीहरूलाई जीवित आकर्षित हुन्छन्?
हामी तरिकामा हामी अनुशासन थिए अनुशासन गर्नुहुन्छ, हामी माग आज्ञाकारी र पूर्णता को स्तर लागि सोध्न, आवाज र हामी सुनेका शब्दहरू तिनीहरूलाई आलोचना? हामी पुराना परिवार नाटक reenacting छ, दुख निको पार्न प्रयास? हामी इमानदार हामी वा हाम्रो परिवारमा अरू कोही एक कुकुर लागि भावनात्मक जिम्मेवारी लिन तयार छ भनेर भन्न सकिन्छ, मायालु तर प्रशिक्षण र यो हेरचाह मात्र होइन?
सुजन नाउँ गरेकी एक महिलाले एक किरकिरा मा असुरक्षित महसुस किनभने त्यो एक कुकुर चाहन्थे मलाई भन्नुभयो, Elizabeth मा दरिद्र छरछिमेकमा, नयाँ जर्सी. त्यसैले त्यो उनको घर मालिक चाँडै उनको त्यसलाई दिन गरेको छ, ताकि भारी एक अंग्रेजी mastiff मिल्यो, त्यसपछि एक जर्मन गोठालो थंडर नाम. कुकुर प्रभावकारी घर को रक्षा गर्छ, अपरिचित द्वारा आउँदा ढोका अगाडि चार्ज. तर सुजन देखि, जो एक नयाँ जर्सी ट्रान्जिट सञ्चालकको रूपमा काम, कुकुर संग काम मा त्यो त्यति चासो संग एक गरिब प्रशिक्षक छ concedes, त्यो साथी वा आफन्त भ्रमण गर्दा छिंडीमा मा थंडर लक छ. त्यो को कटा मेल अनगिन्ती टुक्रा पाउन घर आउन '; कुकुर जाहिर एक खतरा रूपमा ढोका स्लट माध्यम आउँदै लिफाफे देख्नुहुन्छ. त्यो 'को पनि खरोंच ढोका र भाँचिएको Windows ठाँउ थियो.
अहिले, गर्जनका नब्बे पाउण्ड वजन र तिनले उसलाई लिन्छ जब सबै फुटपाथ मा सुजन खींचती. छिमेकीहरूले र छोराछोरीलाई उहाँलाई डराएका छन्, वास्तवमा टोकेको वा कसैलाई हानि कहिल्यै गर्नुपर्छ यद्यपि. कुकुर कर्तव्यनिष्ठ रूपमा आक्रामक यति जस्तो छैन; उहाँले गर्न भाडामा लिएका थियो काम गरिरहेको छ, आफ्नै प्रभावकारिता सिकार. तर सुजन, जो त्यो थंडर प्रेम भन्छन्, त्यो साँच्चै आफ्नो फाइदाको लागि एक कुकुर चाहन्थे कहिल्यै concedes. त्यो शायद एक आत्मरक्षा कोर्स वा सट्टा एक सुरक्षा-अलार्म कम्पनी गर्नु पर्छ. “यो लामो समय मा सस्ता हुनेछ, र सजिलो।”
कारण बुझ्ने हामी चाहन्छौं एक कुकुर सही व्यक्तिहरूलाई छान्ने केन्द्रिय छ, उनलाई ठीक प्रशिक्षण, खुसीको कुरा तिनीहरूलाई जीवित. अधिक हामी आफूलाई बुझ्न, हामी दुवै प्रजाति लागि बनाउन संभावना छ राम्रो विकल्प.
तपाईं यो विचार गर्दा, तपाईं शायद आफ्नो कुकुर पनि सक्रिय वा पनि आसीन छन् भन्ने गुनासो गर्ने मान्छे को धेरै थाह, गिलहरी पीछा वा पनि विचलित आउन मा पनि चासो भनिन्छ जब, घर को पनि सुरक्षा या त तिनीहरूले बहुमूल्य पूरा मदत चाहन्छु nonthreatening. कुकुर सामान्यतया दोष हुन्छ तापनि, रूप अक्सर रूपमा होइन मालिक एक दुर्भाग्यपूर्ण वा बिरामी-विचार छनौट गरे. फलस्वरूप, कुकुर यो के हो भन्दा अन्य केहि हुन दबाब छ, मानिसहरू आफ्नो हात पूर्ण छ, जबकि. एक सानो विचार र अनुसन्धान संग, कुकुर र आफ्नो मान्छे को जीवन धेरै सजिलो र सन्तोषजनक हुन सक्छ. तर एउटा आफ्नै मनोविज्ञान र भावना केहि समझ आवश्यकता हुन्छ, हामी हाम्रो जीवनमा हो र हाम्रो कुकुर मा फिट कसरी जहाँ केही विचार. जिम, upstate न्यूयोर्क मा मेरो नजिकै बस्ने एक शिकारी, एक ठूलो कुत्ताघर मा तीन beagles राख्छ 360 दिन एक वर्ष. तिनीहरू खेल ट्रयाक गर्न अन्य पाँच दिन मा केही बिहान घण्टा निस्कन्छन्. तिनीहरू पर्खिरहेका धेरै समय खर्च, तर आफ्नो समय आउँछ जब, तिनीहरूले कुत्ताघर बाहिर र जंगल मा गोली. “तिनीहरूले ठूलो कुकुर हो,” जिम भन्छन्, जो पनि उनलाई नाम छैन.
उहाँले तिनीहरूलाई भएको मनपर्छ? म एक पटक उहाँलाई सोधे. “तिनीहरूले जब जब म के,” आफ्नो प्रतिक्रिया थियो. म ले ड्राइव जब म कुकुर लागि reflexively दुःखित, म मेरो आफ्नै कुकुर विचार विशेष गरी’ पुलपुलिएर जीवन, तर जिम गरेको कुकुर, तिनीहरूले चर्को छौं जबकि, तिनीहरूले वञ्चित छन् थाहा लाग्दैन. सबै कुकुर यसरी बाँच्न सकिएन. तर जिम गरेको beagles कुकुर को अचम्मको अनुकूलता देखाउन. तिनीहरूले शिकार त्यहाँ छौं, अवधि. जिम उहाँले समर्पित गर्नुपर्छ कसको एक पत्नी र चार छोराछोरी छ, र उहाँले आफ्नो निर्माण दृढ व्यस्त छ; उहाँले आफ्नो शौक वा आफ्नो confidants हुन कुकुर आवश्यकता छैन. एक दिन एक पल्ट, उहाँले मासु र बाकी को एक बाल्टिन संग कुत्ताघर बाहिर टाउको र कुत्ताघर मा सामाग्री tosses. क्रिसमस मा, उहाँले बिस्कुट को एक बाल्टिन अझ यसो भन्छन्. तिनीहरू सबै आफ्नो शट प्राप्त, तिनीहरूले बिरामीहरूबाट हुनुहुन्छ भने र एक पशु चिकित्सक देख्न. यस beagles आफ्नो घर भित्र कहिल्यै छन्. उहाँले गर्व र रमाउँछन् तिनीहरूलाई बताइएको, तर तिनीहरूले उपकरण छौं, एक ड्रिल वा एक नयाँ बन्दुक जस्तै, सानो छैन मान्छे, समकालीन अर्थमा पनि साँच्चै घरपालुवा जनावरको. यद्यपि कुकुर सामग्री र स्वस्थ लाग्न. उहाँले तिनीहरूलाई चाहनुहुन्छ किन जिम ठीक थाह. तिनीहरूले सरल नियम बुझ्न र, कुकुर समय को परिच्छेदको मानव जानकारी कमी देखि, तिनीहरूले शिकार बीच जाने कसरी लामो थाहा छैन. यसले हामीलाई धेरै बाटो कुकुर को लागि इच्छा थियो नहुन सक्छ, तर त्यो चाहन्छ कुकुर र किन को प्रकार को बारे मा आफ्नो स्पष्टता सबैको लागि राम्रो संलग्न काम देखिन्छ.
त्यसपछि Andrea त्यहाँ, वरमोंट मा एक पचास-एकड खेतमा बस्ने एक कलाकार. विभिन्न जटिल कारणहरू लागि, त्यो मानिसहरूको विचार त्याग्नुभएको गर्नुपर्छ, विवाह, एक परिवार; बरु, त्यो एक कोल्ली उद्धार समूह खोजे. त्यो, पनि, त्यो एक कुकुर चाहन्थे किन ठीक बुझे, र त्यो उनको संग गठन गर्नुपर्छ बन्धन तिनीहरूलाई दुवै खुसी बनाउन देखिन्छ.
“म सम्बन्धबारे भाग्यशाली भएको छैन, कम से कम छैन अझै,” उनी भन्छिन्. “तर Whisper र म प्रत्येक अन्य भनेपछि हुरुक्कै. म उनको संग यति मजा छ, र त्यो मलाई यति सान्त्वना र प्रेम दिन्छ. म त्यो 'अर्को सम्बन्ध एक पुल छ आशा, तर त्यो छैन भने, म ठीक हुनेछु।”
मलाई भन्न लागि यो होइन र Andrea एक बुद्धिमानी वा स्वस्थ छनौट गरे कि सत्य मा म साँच्चै निर्णय गर्न सक्दैन. तर त्यो उनको मनसाय विचार, एक कुकुर उनको जीवन मा फिट हुनेछ कसरी बारे, र त्यो एक मानिन्छ निर्णय गरे.
“मेरो बच्चा एक माग्दै गरिएको किनभने” छ, अर्कोतर्फ, सामान्यतया एक संदिग्ध कारण घरपालुवा प्राप्त गर्न. यो एक साधारण गर्दैनन् छ, तर कुकुर अक्सर यो कुनै न कुनै समय छोराछोरीलाई माग लागि क्रिसमस आश्चर्य रूपमा किनेको. प्रतिज्ञा गरेका र बिर्सेका मिल; यो नवआगन्तुक चुचुराहरू चासो, त्यसपछि wanes.
सधैं. मेरो एक बाह्र वर्षीया छिमेकीलाई क्रिसमस लागि गत वर्ष सुनको रिट्रीवर मागे र आफ्नो आमाबाबुले सहमत, अवस्था जेरेमी यो जिम्मेवारी लिन कि. सायद तिनीहरूले त्यो चाहन्छु किनभने उनी पहिले नै हम्सटर cages आफ्नो माछा खुवाउने र बाहिर सफाई आफ्नो प्रतिबद्धता साबित हुने विश्वास थियो.
कुनै पनि घटना मा, जेरेमी Clancy हेरविचार गर्नुहुन्छ. उहाँले अगाडि र स्कूल पछि उहाँलाई चल्छ, उहाँलाई खुवाउनुहुन्छ, उहाँलाई ब्रश, हरेक शनिबार प्रशिक्षण कक्षामा उहाँलाई लिन्छ. स्कूल पछि प्रत्येक दिन, जेरेमी र Clancy सँगै तालिम. भनिन्छ जब कुकुर आउन सिकेको छ, बस्न, रहन, र आदेश मा सुत्न. 4-एच कार्यक्रम परिचित ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छे छोराछोरीलाई जनावर लागि जिम्मेवारी लिन लागि यो हुन सक्छ स्वस्थ थाह. बच्चा मा मान्छे- र कुकुर-crazed उपनगरों शासन अक्सर देखिन्छ जहाँ हुन, यार्ड साना, बडा कुकुर यो कति असामान्य थाह. जेरेमी लागि, एक कुकुर रही एक सकारात्मक कुरा जस्तै लाग्छ; उहाँले आफ्नो वचन पालन, वा सायद आफ्नो आमाबाबुले त्यो राखन जोड असामान्य कदम चाले. कुनै पनि तरिका, म उहाँलाई जस्तै केही बच्चाहरु सामना छु. आमाबाबु, सावधान: एक घर मा कुनै एक कुकुर लागि प्राथमिक जिम्मेवारी लिन छ, र बच्चाहरु छैन भने, आमा वा बुबा मा कदम छ.
आमाबाबुले अक्सर तिनीहरूले सेल फोन को लागि राम्रो हो आफ्नो बच्चाहरु कुराहरू दिन, कम्प्युटर, यी कुराहरू खरीद पछि प्रयोग वा उपचार गरिनेछ कसरी बारेमा धेरै विचार बिना कुकुर.
त्यसैले किन कुकुरको चाहनुहुन्छ?
यसको जवाफ भने, भाग मा, एक जटिल भावनात्मक इतिहास देखि पलाउँछ (पक्कै पनि मलाई त्यस्तै छ रूपमा), तपाईं बुझ्न सुनिश्चित र यो तपाईं घरपालुवा को सोधेर छन् सिर्फ के राम्ररी विचार. Anthropomorphizing कुकुर को हाम्रो बानी बावजुद, तिनीहरूले हामी सोच रहे र संभवतः हामी कहिलेकाहीं भर्न उनलाई सोध्नु भावनात्मक भूमिका को सूक्ष्म बुझ्न सक्दैन बुझ्न छैन. ठीक चुनिएका छैन भने तिनीहरूले पनि हाम्रो परिभाषा गरेर amiably व्यवहार गर्न सक्छन्, प्रयोग, र प्रशिक्षित. हामीले आशा सामान्यतया धेरै पनि उच्च भएकोले, हामी सजिलै निराश वा रिसाएको बन्न. हामी बनाउँदैछौं समस्या biters कुत्तों कि पर्याप्त प्रमाण छैन, chewers, barkers, antidepressants को आवश्यकता मा neurotics. यो यति धेरै मानिसहरू गलत कारणले गर्दा गलत समयमा गलत कुकुर प्राप्त आंशिक किनभने हुन्छ. एक कुकुर मा लिएर एक नैतिक घटक छैन. तिनीहरूले उच्च-स्तर सोचा प्रक्रियाहरु सक्षम छैनन् तापनि, कुकुर पक्कै भावना छ. तिनीहरूले पीडा र हानि अनुभव, डर र स्नेह. तिनीहरू र अन्य जनावर अन्तस्करण मानिसहरूलाई केही नैतिक अडान दिनुभएको छ. यो तिनीहरूलाई सन्तान बराबर बनाउन सक्छ, तर यो हामी तिनीहरूलाई कसरी व्यवहार सोच्न हामीलाई लाचार गर्छ. तर हरेक कुकुर सबै को लागि छैन. म बढ्दो स्वीकार छैन, राजनीतिक हरेक कुकुर उद्धारका उत्तिकै योग्य छ कि धारणा संचालित, सबै कुकुर हाम्रो झमेला आफ्नो अनुकूलता मा अनिवार्य जस्तै हो कि, भीड, litigious मानव वातावरण. म साँचो हुन पाउँदैनन्. कुकुर ferociously idiosyncratic हो, बेतहाशा अलग नस्ल को आधार मा, आनुवंशिक, सोतरको अनुभव, उपचार, र वातावरण. केही Genial र शान्त, स्वभाव लागि नस्ल, र केही हिंस्रक हो, नस्ल र शिकार वा झगडा गर्न प्रशिक्षित. ती व्यवहार सबै परिवर्तन गर्न प्रशिक्षण कौशल वा समय छ हामीलाई केही. कुकुर को गलत छनौट तपाईं को लागि एक सपना प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवार, र आफ्नो समुदाय; सही एक, एक आनन्द.
केही कुकुर काम गर्न आवश्यक, केहि छैन; अरूलाई पनि यो सूचना छैन, जबकि केही गर्जनका देखि लुकाउन हुनेछ; केही टोपी मा घृणा मान्छे र अरूलाई पीछा बाइक. तपाईं सधैं अग्रिम मा यी ओडिटीज थाह हुँदैन; सावधानी संग अगाडी बढन सबै अधिक कारण.
7 आधुनिक डेटिङ बारे कुरूप सत्य
पहिलो छाप – प्रयोगकर्ता नाम